Famakiana Baiboly isan'andro 23 Oktobra 2018. | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Famakiana Baiboly isan'andro 23 Oktobra 2018.
Ny famakiana Baiboly ataontsika isan'andro dia avy amin'ny bokin'ny 2 Tantara 9: 1-31 sy 2 Tantara 10: 1-19. Vakio sy ho voatahy.
2 Tantara 9: 1-31:
1 Ary nony ren'ny mpanjakavavin'i Sheba ny lazan'i Solomona, dia tonga hanandrana an'i Solomona tamin'ny fanontaniana sarotra tany Jerosalema izy, niaraka tamin'ny olona betsaka sy rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena be dia be ary sarobidy; ary fony izy mankanesa any amin'i Solomona, dia niresaka taminy izay rehetra tao am-pony izy. 2 Ary nambaran'i Solomona taminy ny fanontaniany rehetra: ary tsy nisy zavatra niafina tamin'i Solomona, fa tsy nambarany azy. 3 Ary rehefa nahita ny fahendren'i Solomona sy ny trano izay naoriny ny mpanjakavavin'i Sheba, 4 ary ny sakafon'ny latabatra sy ny fipetrahan'ny mpanompony ary ny fisian'ny mpanompony ary ny fitafiany; ny kapoakany sy ny fitafiany; ary ny fiakarana izay niakarany nankany an-tranon'i Jehovah; tsy nisy fanahy intsony tao aminy. 5 Ary hoy izy tamin'ny mpanjaka: Marina izany, izay reko tany amin'ny taniko ny amin'ny asanao sy ny fahendrenao. 6 Nefa tsy nino ny teniny aho mandra-pihaviko, ary efa hitan'ny masoko izany; indro, ny antsasaky ny haben'ny fahendrenao dia tsy nolazaina tamiko; fa mihoatra lavitra ny laza izay reko. 7 Sambatra ny olonao, ary sambatra ireto mpanomponao ireto, izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao. 8 Isaorana anie Jehovah Andriamanitrao, Izay nankasitraka anao nametraka anao eo amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho an'ny Tompo Andriamanitrao; satria tia ny Isiraely Andriamanitrao ka hampitoetra azy mandrakizay, koa dia notendreny ho mpanjaka hanjaka aminy izy. fitsarana sy rariny. 9 Ary izy nanome talenta volamena roa-polo amby zato sy zava-manitra be dia be ary vato soa; ary tsy nisy zava-manitra toy ny nomen'ny mpanjakavavin'i Sheba an'i Solomona mpanjaka. 10 Ary ny mpanompon'i Hurama sy ny mpanompon'i Solomona, izay nitondra volamena avy tany Ofira, dia nitondra hazo algoma sy vato sarobidy. 11 Ary ny mpanjaka dia nanao ny tany algoma ho any an-tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny mpanjaka ary ny lokanga sy valiha ho an'ny mpihira; ary tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny tanin'ny Joda. 12 Ary Solomona mpanjaka dia nanome ny mpanjakavavin'i Sheba izay rehetra niriny, na inona na inona nangatahiny, afa-tsy izay nentiny ho an'ny mpanjaka. Dia nihodina izy ka lasa nankany amin'ny taniny, dia izy sy ny mpanompony. 13 Ary ny lanjan'ny volamena tonga tany amin'i Solomona tao anatin'ny herintaona dia talenta volamena enim-polo amby enin-jato; 14 afa-tsy izay nentin'ny mpivarotra sy ny mpivarotra. Ary ny mpanjaka rehetra tany Arabia sy ny mpanapaka ny tany dia samy nitondra volamena sy volafotsy ho an'i Solomona. 15 Ary Solomona mpanjaka nanao volamena roa hetsy voalamina volamena voalamina: sekely volamena voadaroka enina amby iray hetsy no nitazona iray. 16 Ary ampinga volamena telon-jato no namboariny; volamena sekely telonjato no napetaka tamin'ny ampinga iray. Dia napetraky ny mpanjaka tao an-trano amin'ny alan'i Libanona izy ireo. 17 Ary ny mpanjaka dia nanao seza fiandrianana ivory lehibe, ary nopetahany takela-bolamena madio. 18 Ary nisy enina ambaratonga enina ho eo amin'ny seza fiandrianana, misy fitoeran-tongotra volamena, natsangana tamin'ny seza fiandrianana, ary nijanona teo amin'ny lafiny roa amin'ny fipetrahana, ary liona roa nijanona teo anilan'ny vala andaniny sy ny an-daniny eo amin'ny ambaratonga enina. Tsy nisy zavatra natao toy izany tany amin'ny fanjakana rehetra. 20 Ary ny fisotroan'i Solomona mpanjaka dia volamena, ary ny fanaka rehetra tao amin'ny trano Alan'i Libanona dia volamena madio; tsy nisy volafotsy; fa tsy nisy zavatra natao tamin'ny andron'i Solomona. 21 Fa ny sambon'ny mpanjaka nankany Tarsisy niaraka tamin'ny mpanompon'i Hurama: isaky ny telo taona indray mandeha ny sambon'i Tarsisy nitondra volamena, volafotsy, ivoara, rajako ary vorombola. 22 Ary Solomona mpanjaka dia nanan-karena sy hendry indrindra noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. 23 Ary ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany nitady ny tavan'i Solomona hihaino ny fahendreny, izay nataon'Andriamanitra tao am-pony. 24 Ary samy nitondra ny fanatiny avy ny olona rehetra, dia fanaka volafotsy sy fanaka volamena sy fitafiana, fanaka sy zava-manitra, soavaly ary ampondra, isan-taona isan-taona. 25 Ary Solomona nanana efi-trano efatra arivo fitoeran'ny soavaly soavaly sy kalesy ary soavaly fitaingina roa arivo amby iray alina; izay notolorany tao an-tanànan'ny kalesy sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. 26 Ary nanjaka tamin'ny mpanjaka rehetra hatramin'ny renirano ka hatramin'ny tanin'ny Filistina ary hatramin'ny sisin-tanin'i Egypta izy. 27 Ary ny mpanjaka nanao volafotsy tany Jerosalema toy ny vato, ary ny hazo sedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny lemaka iva. 28 Ary nangalana soavaly avy tany Egypta sy tany amin'ny tany rehetra koa Solomona. 29 Ary ny tantaran'i Solomona, na ny voalohany na ny farany, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'i Natana mpaminany sy amin'ny faminanian'i Ahià Silonita ve ny fahitan'i Iddo mpahita an'i Jeroboama, zanak'i Nebata? 30 Ary Solomona dia nanjaka tany Jerosalema tamin'ny Isiraely rehetra efa-polo taona.
2 Tantara 10: 1-19:
1 Ary Rehoboama nankany Sekema, fa tany Sekema no nivoahan'ny Isiraely rehetra hampanjaka azy. 2 Ary nony ren'i Jeroboama, zanak'i Nebata, izay tany Egypta, fa nandositra niala teo anatrehan'i Solomona mpanjaka izy, dia niverina avy tany Egypta Jeroboama. 3 Dia naniraka izy ka niantso azy. Dia tonga Jeroboama sy ny Isiraely rehetra ka niteny tamin-dRehoboama hoe: 4 Rainao nampahory ny zioginay; 5 Ary hoy Izy taminy: Mankanesa at me amiko, rehefa afaka hateloana. Dia lasa ny olona. 6 Ary Rehoboama mpanjaka naka saina tamin'ny anti-panahy izay nitoetra teo anatrehan'i Solomona rainy fony fahavelony, ka nanao hoe: Ahoana no hevitra omenao hamaly izao olona izao? 7 Ary hoy ireo taminy: Raha tsara fanahy amin'ity firenena ity ianao ka sitraka aminy ary miteny teny tsara aminy, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. 8 Nefa nahafoy ny saina nomen'ny anti-panahy azy izy, ary niara-nihevitra tamin'ny tovolahy nitaiza azy, izay nijanona teo alohany. 9 Ary hoy Izy taminy: Inona no torohevitra omenao hamaly ny olona, ​​izay niteny tamiko hoe: Atsaharo ny ziogan'ny rainao efa napetrakao aminay? 10 Ary ny tovolahy nitaiza azy dia niteny taminy ka nanao hoe: Toy izany no hamalianao ny olona izay niteny taminao hoe: Rainao nampitondra zioga mavesatra anay; izao no holazainao aminy: Ny rantsan-tanako kely dia ho lehibe noho ny valahin-draiko. 11 Fa ny raiko efa nampanao zioga mavesatra anao, dia vao mainka hataoko mahery ny zioganao; fa ny raiko dia namay taminao, fa maingoka maingoka aho. 12 Ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra dia nankany Rehoboama tamin'ny andro fahatelo, araka ny tenin'ny mpanjaka nanao hoe: Mankanesa at to amiko indray amin'ny andro fahatelo. 13 Ary ny mpanjaka namaly azy mafy; ary Rehoboama mpanjaka nahafoy ny hevitry ny anti-panahy, 14 ka namaly azy araka ny torohevitry ny tovolahy izy nanao hoe: Raiko no nampamainty ny zioganao, fa izaho kosa hanampy azy; amin'ny maingoka. 15 Koa tsy nihaino ny olona ny mpanjaka; fa avy amin'Andriamanitra ny antony, mba hahatanterahan'ny Tompo ny teniny, izay nampilazainy an'i Ahia Silonita tamin'i Jeroboama, zanak'i Nebata. 16 Ary nony hitan'ny Isiraely rehetra fa tsy hihaino azy ny mpanjaka, dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe: Inona moa no anjaranay amin'i Davida? ary tsy manana lova amin'ny zanak'i Jese izahay; samy mody any amin'ny tranonao avy, ry Isiraely; ary ankehitriny, ry Davida, mijere any amin'ny tranonao. Dia samy nody teo amin'ny lainy ny Israely rehetra. 17 Fa ny Zanak'Isiraely izay nonina tany an-tanànan'ny Joda dia Rehoboama no nanjaka taminy. 18 Ary Rehoboama mpanjaka nandefa an'i Hadoram izay mpifehy; dia nitora-bato azy ny Zanak’Israely ka maty. Fa Rehoboama mpanjaka dia nanao faingana hanakona ny kalesiny handositra ho any Jerosalema.
Previous lahatsoratra60 mfm vavaka manondro manohitra ny toe-tsaina momba ny tsy fananana
Next lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro Androany 24 Oktobra 2018
20 Ny vavaka amin'ny fanafahana dia manome lanja ny lela
10 Hevitra vavaka mahery vaika ho fiarovana amin'ny fampiasana ny salamo
20 Ny laharam-bavaka momba ny ady dia manohitra ny fahavalon'ny fandrosoana